Soo dejisan Chromium 56.0.2898 af-soomaali – Vessoft
Soo dejisan Chromium
Chromium – browser oo degdeg ah oo ammaan ah oo taageera teknoolajiyada casriga ah. Muuqaaladan ugu weyn ee software-ka waxaa ka mid ah: xawaaraha sare ee shaqada, .Wadashaqayntaas xisaabaadka Google, shaqo la matoorada caan search, arkaysid of-files pdf iwm chromium awood u si qarsoodi ah u socday online oo ma badbaadin taariikh websites daawan. Software wuxuu kuu ogol yahay in la ballaariyo fursadaha ay isku xidha daro.
Xowliga badan ee shaqada
Awoodda ay u isticmaalaan browser si qarsoodi ah
.Wadashaqayntaas La account Google
Comments on Chromium:
Chromium Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Yandex.Browser 16.9.1
Kadib Browser Fast oo ammaan ah iyada oo taageero tiknolojiyada casriga ah. Software ka kooban yahay tiro hawlaha waxtar leh iyo taageerada adeegyada yandex search engine.
العربية, English, Українська, Français... Google Chrome 54.0.2840.59 iyo 55.0.2883.7 dev
Kadib browser The lacag la'aan ah oo degdeg ah si loo hubiyo in joogis raaxo leh ee internet-ka. software The falgala dhammaan adeegyada web shirkadda Google.
English, Українська, Français, Español... Comodo Dragon 52.15.25.663
Kadib browser Soonkii waxaa diiradda lagu saaray amniga iyo arimaha gaarka ah ee user. blocks software The internetka xaasidnimo, spyware iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isku xiro kordhinta.
العربية, English, Українська, Français... Midori 0.5.11 Stable iyo Portable
Kadib fududahay in la isticmaalo An browser taageera tiro badan oo ah qalab loogu talagalay tiirka raaxo ee internet-ka.
Pale Moon 26.1.1 Stable iyo Portable
Kadib browser waxaa loogu talagalay kordhinta xawaaraha iyo hawlgal deggan internet-ka. software waa la jaan qaada goobaha iyo kordhin inta badan Firefox.
Kadib Browser ayaa functional iyadoo ah modules kala duwan ee tiirka haboon ee internet-ka. Software waxay bixisaa ku furid ee pop daaqadaha iyo disables ka downloads ee images.
English, Українська, Français, Español... Amigo 47.5.2526.111
العربية, English, Українська, Français... Ares 3.1.9.4045 iyo 2.4.3
العربية, English, Français, Español... Xvid 1.3.4
Editor Audio Software in encode iyo kelmadaha faylasha video. Software wuxuu isticmaalaa isku geynta ee file sare riixo oo bixiya tayada image ugu badnaan.
English, Français, Español, Deutsch... Horizon 2.8.14